EXCLUSIVE – प्रहरीको तीनमहिने गोप्य अप्रेसनको सफलता : आतंकबाट यसरी जोगियो ललितपुर ! | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
ललितपुरमा हिजो बम डिस्पोजको श्रृंखलाको खोजी अप्रेसनको सफलता नै हो, ठूलो मात्रामा बरामद भएको ग्रिनेड र बन्दुकलगायत विष्फोटक पदार्थहरु ।
ललितपुर प्रहरी परिसरमा बिहानैदेखि एउटा सफल अप्रेसनको चर्चा भयो । ललितपुरको ईखाछेँमा बम भेटिएको घटनाको कनेक्सनमा ललितपुर प्रहरीले यस्तो सफलता प्राप्त गरेको हो ।
हिजो बिहान प्रहरीको पासोमा परेका श्याम भन्ने सानुराज बज्राचार्यको पक्राऊ सँगसँगै साँझ बम डिस्पोजको श्रृंखलाको खोजी अप्रेसनको सफलता नै हो, ठूलो मात्रामा बरामद भएको ग्रिनेड र बन्दुकलगायत विष्फोटक पदार्थहरु ।
बज्राचार्यको कोठाबाट बरामद भएको विष्फोटक सामाग्रीहरुमा २ सय ९४ थान ग्रिनेडमात्र छन् । जसमा आधा विष्फोटक पदार्थ भरिएको ग्रिनेड ३५ थान, हेन्ड ग्रिनेड बनाउन प्रयोग हुने १ सय ७३ थान बरामद भएको छ । साथै, कटुवा बन्दुक, गोलीहरु, विष्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने सामाग्री, विष्फोटक पदार्थ डेटोनेटर, विष्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने औजारलगायत प्रहरीले बरामद गरेको बताइएको छ ।
प्रहरीको हिरासतमा रहेको श्यामलाई सोधपुछ चलिरहेको बताइएको छ । लकडाउनअघि गाःबहाल क्षेत्रस्थित मिठाई पसलअगाडि बम विष्फोट गराएको पुष्टि भएपछि भूमिगत रहँदै आएको श्यामलाई प्रहरीले लामो समयदेखि निगरानीमा राखेको बताइएको छ ।
EXCLUSIVE : ललितपुरको पुल्चोकमा बम राख्ने पक्राउ, इखाछेँमा सुनियो विष्फोटको आवाज !
FOLLOWUP : ललितपुरको इखाछेँमा एकाएक आंतक : के थियो ठूलो विष्फोटको आवाज ?
Previous articleपीसीआर मेशिन यो साता आईपुग्ने : एकैपटक ९६ जनाको स्वाब परीक्षण र एकघण्टाभित्रै रिपोर्ट आउने
Next article२४ घण्टामा २७३ संक्रमित थपियो, कुल संक्रमित संख्या ५३३५ !